သစ္စာသိပြီးမှ သတိပဌာန်ပွားပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » သစ္စာသိပြီးမှ သတိပဌာန်ပွားပါ
Posted by ariyathitsa on Feb 3, 2012 in Copy/Paste | 18 comments
ဗုဒ္ဓတရားကို ဗုဒ္ဓရဲ့အဆို အဆုံးအမuကို မရပဲနဲ့တော့ ဒါဗုဒ္ဓတရားလို့ မလုပ်သင့်ပါ။ လူတွေဟာ အဆင်း၊ အသံ စတဲ့ ကာမအာရုံတွေထဲမှာ နေကြရတာဖြစ်တယ်။ ကာမအာရုံတွေကို ၀သွားလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ မရလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီအာရုံတွေကို ငြီးငွေ့သွားတတ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီအာရုံတွေထဲကနေ ထွက်ပြေးချင်တယ်။ ဒီအာရုံတွေနဲ့နေရတာကို မပျော်မွေ့တော့ဘူး။
ဒီအာရုံတွေနဲ့ မနေချင်တော့တာမို့ တရားလုပ်တယ်လို့ လုပ်တတ်ကြတယ်။
တရားလုပ်တယ်ဆိုပြီး ဒီအာရုံတွေနဲ့ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ ကင်းအောင် လုပ်တတ်ကြတယ်။
စိတ်ကို ရူပအာရုံတစ်ခုခုမှာ ရပ်ထားလိုက်လို့ စိတ်က မရွေ့တော့ဘူး။ ရုပ်အာရုံတစ်ခုခုမှာ စိတ်ကို ရပ်ထားလို့ မြင်ရင် မြင်တာမှာ ရပ်၊
ကြားရင် ကြားတာမှာ ရပ် ဆိုတော့ စိတ်က မကူးတော့ဘူး။ ဒါစိတ်မကူးတဲ့ လုပ်ငန်း (သညာဝိရာဂ) သညာတွေပယ်တာကို လုပ်တာပဲ။
ဒီ ရုပ် (ရူပ) အာရုံတွေထဲမှာနေလို့ သညာတွေပယ်ပြီး ကာမတွေကလွတ်နေလို့ အေးသွားတာကို ဘုရားအဆုံးအမလို့ ထင်နေကြ။
ဒါ ဘုရား အဆုံးအမ မဟုတ်ပါဘူး။
အဲဒါ ရူပ အာရုံနဲ့ နေတာပါ။
ဘုရား အဆုံးအမကို မသိရင် “မမြင်ဘူးရင် မူး မြစ်ထင်” ဆိုသလို ဒီ ရူပအာရုံနဲ့ အေးနေတာကိုပဲ ဘုရားရဲ့တရားလို့ ယူတော့တာ။
အနေတစ်ခုကနေ နောက်အနေတစ်ခုကို ပြောင်းသွားလို့ ကြည်အေးငြိမ်းချမ်းသွားတာကိုပဲ ဒါ ဘုရားတရားပဲလို့ ထင်သွားကြတာ။
ဒါ့ကြောင့် ဘုရားတရားကို ပွားများတော့မယ်ဆိုရင် ဘုရားတရားက ဘာကို ပြောတာလဲဆိုတာ အရင်သိအောင်လုပ်ပါ။
အရင် သိအောင်မလုပ်ပဲ အားထုတ်မိရင် ဒီရူပအာရုံနဲ့ နေရတာကိုပဲ ဘုရားတရားလို့ ထင်တော့တာပဲ။
နောက်ထပ် ဒီရူပအာရုံတွေကို တစ်စစီ ဖျက်ပစ်လိုက်ပြီး လဟာပြင်ဖြစ်သွားတဲ့ အရူပအာရုံ။
ဒီ ရူပအာရုံကွယ်သွားပြီး (ဘာမှ မရှိတဲ့) အာကာသလဟာပြင်သညာကိုလည်း နိဗ္ဗာန်လို့ ယူတတ်တယ်။
အဲဒီကနေ အဲဒီ အာကာသလဟာပြင်ကို သိနေတဲ့ စိတ်ကကော တကယ်ရှိလို့လားဆိုတဲ့ ၀ိညာဏသညာဖြစ်ပြန်ရော။
နောက်ဆုံးကျတော့ နတ္ထိကိဉ္စိ ဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီး ဖြစ်သွားရော။
ဒါကလည်း သိပ်ကောင်း၊ သိပ်လွတ်မြောက်တဲ့ သဘောတရားဆိုတော့ အထင်ကြီးစရာပဲ။
ဘယ်သူကဘာပြောပြော အဲဒီနေရာကနေ မဆင်းချင်တော့ဘူး။
ဒါ့ကြောင့် ဘုရားရဲ့တရားကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် သိခွင့်မရှိပါဘူး။
သိမယ်ဆိုရင်လည်း သူဟာ ဘုရားရဲ့တပည့် မဟုတ်တော့ဘူး။
ဒီရူပ၊ အရူပ (သမာပတ် (၈)-ချက်) တွေကို ရောက်နေရင် လူက ကောင်းနေ၊ ငြိမ်းနေပြီး ဘယ်သူနဲ့မှကို မတူတော့ဘူးလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ထင်တော့တာ။
အဲဒီရောက်နေပြီဆိုရင် အဲဒီကနေ မထွက်ချင်တော့ဘူး။
ဒါကိုပဲ ဘုရားတရားလို့ ရပ်တည်နေကြတာတွေကိုက ဒုနဲ့ ဒေးပဲ။
အဲဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဘုရားတရား (အစစ်)ပျောက်နေလို့ပဲ။
ဘုရားတရားက ကာမတွေထဲမှာ မွေ့လျော်နေရမှာလည်း မဟုတ်ဘူး။
ဒီရူပ၊ အရူပ (သမာပတ်) တွေထဲမှာ မွေ့လျော်နေရမှာလည်း မဟုတ်ဘူး။
ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ ဒီ ကာမ၊ ရူပ၊ အရူပ ဘုံသုံးပါးသားက ဒုက္ခသားတွေလို့ ဘုရားက ပြောခဲ့တယ်။
အဲဒါက ဒီခေတ်မှာ မပေါ်လွင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။
အဲဒီလိုဖြစ်နေရတာက ဘုရားတရားဖြစ်တဲ့ အရိယသစ္စာတရားကို အရင် နားလည်အောင်မလုပ်လို့ပဲ။
အဲဒီလို နားလည်အောင်မလုပ်ပဲ မှန်တမ်းရမ်းတမ်း ကြားဘူးနားဝနဲ့ လုပ်နေရင် ရူပ၊ အရူပတရားတွေထဲမှာ နစ်မျောခံရဖို့ပဲ ရှိပါတယ်။
ဘုရားတရား (အရိယသစ္စာ)ဟာ ကာမတရား (သမုတိသစ္စာ)လည်း မဟုတ်ဘူး။
ရူပ၊ အရူပတရား (ပရမတ္တသစ္စာ)လည်း မဟုတ်ဘူး။
(၁) တရားသိပြီးသူကို ပေါင်းသင်းရမယ်။
(၂) အဲဒီသူရဲ့ ပြောဆိုဆုံးမချက်နာယူရမယ်။
(၃) အဲဒီသူရဲ့ ပြောဆိုဆုံးမချက်တွေကို နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရမယ်။
(၄) ပြောဆိုဆုံးမချက်တွေကို နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်လိုက်လို့ သစ္စာကို မြင်သိမှ ဗုဒ္ဓရဲ့တရားကိုသိတယ်၊ သောတာပန်ဖြစ်တယ်လို့ ပြောရတယ်။
ဒါ့ကြောင့် သောတာပန် ဖြစ်ဖို့က လုပ်ယူလို့မရဘူး၊ နာကြား(ဆင်ခြင်)ယူရတာ။
ဒီအချက် (၄)ချက်နဲ့ ပြည့်စုံသွားတာကို သောတာပန်လို့ ပြောတာ။
ဒါ့ကြောင့် ဘုရားရဲ့ အရိယသစ္စာကို နာကြားမိဖို့လိုတယ်။
ဗုဒ္ဓဟောခဲ့တဲ့ သစ္စာလေးပါးဖြစ်တဲ့ ဒုက္ခအရိယသစ္စာ၊ သမုဒယအရိယသစ္စာ၊ မဂ္ဂအရိယသစ္စာ၊ နိရောဓအရိယသစ္စာ စသော အရိယသစ္စာကို အရင်သိအောင်လုပ်ဖို့နှင့်
အရိယသစ္စာလေးပါးကို အရင်သိအောင်လုပ်သိပြီးမှသာ သတိပဌာန်တရားပွားများထိုက်ကြောင်း နှင့်
www.ariyathitsa.org website တွင် ပါရှိသော
” သစ္စာသိပြီးမှ သတိပဌာန်ပွားပါ ” အမည်ရတဲ့ MP_3 အသံတရားတော်တွင်
(Download) ရယူပြီး အသေးစိတ်နာယူနိုင်ပါကြောင်း ဓမ္မလမ်းညွှန်ပြလိုက်ရပါသည်။
ငါးပါးသီလတောင် မှန်မှန်ကန်ကန် အဓိပ္ပါယ်မဖော်နိုင်ဘဲနဲ့ သစ္စာတွေ သတိပဌါန်တွေ လုပ်နေတော့ကာ…
မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီး၏ အရိယသစ္စာလေးပါး တရားတော်များ။
ဘယ်သူမှ မ၀င်ကြဘူးဆိုပြီး စိတ်မပျက်ပါနဲ့ True answer ၇ယ်
ပြောလဲ မောရုံမို့ မပါတာပါ
True answer ကတော့ ရှေ့ဆုံးတန်းမှာ ရပ်လျှက်ပဲနော် ..
အားပေးနေပါတယ်တယ်ဗျာ…. နောက်မှာ အမြဲတမ်းရှိနေပါတယ် …
ကိုယ်က နင်သဘောပေါက်သွားလို့ မပါတော့တာဘူး ထင်နေတာ။ အခု ပါလာပြန်ပြီ၊၊ နင်လည်း တော်တော်ပိန်းသေးတာပဲ ဒီလောက်ဟောနေတာကို။
True answer ကတော့ ရှေ့ဆုံးတန်းမှာ ရပ်နော် ဆိုတော့ သူ့ရှေ့မှာက(ရူပ၊ အရူပ) ချောက်ပဲ ရှိတော့တာ၊ ဆက်တိုးရင် ပြုတ်ကျဖို့ပဲကျန်တော့တယ်။
အားပေးနေပါတယ်တယ်ဗျာ…. နောက်မှာ အမြဲတမ်းရှိနေပါတယ် ဆိုတာ ကြိုးတန်းလန်းနဲ့လား? ကိုယ့်လူလဲ ကြိုးတန်းလန်းနဲ့ ချောက်ထဲ ပြုတ်ကျမှာ ဧကန်မလွဲပဲ။
အေးလေး – – – တတ်နိုင်ရင်တော့ ငါကယ်ကြည့်ပါဦးမယ်လေ။
ကယ်လို့ မရလဲ မတတ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။
ဆိုတော့ ငါးပါးသီလကို မှန်မှန်ကန်ကန် ယူနိုင်ပြီးမှ…
မြန်မာပြည်ကထေရ၀ါဒနှအယူနှင့်မတိုင်း တစ်ဖက်သတ် မပြောသင့်ပေ။
သဘောထားကြီးစွာ ဝေဖန်မှုကို ခံနိုင်ဖိ်ု့လိုပါတယ်။
ကိုယ့်ဝေဖန်တာ မကြိုက်လျှင် သူများကိုလည်း ဆီလို အပေါက်ရှာပြီး လိုက်မဝေဖန်သင့်ပါ။
မည်သူပဲဖြစ်ဖြစ် နှိုင်းယှဉ်လေ့လာနိုင်ပြီး လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ပဲ လိုကြောင်း
True Answer သဘောပေါက်ထားသည့် ပရမတ္တသစ္စာတရားများနှင့် ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ဟောကြားထားသော အရိယသစ္စာတရားများကို ၀ါဒစွဲမပါပဲ
True Answer ဆိုတဲ့ နာမည်အတိုင်းအဖြေမှန်ထုတ်နိုင်ပါစေ။
ငါးပါးသီလ ဆိုတာ ၀ါရိတ္တသီလအုပ်စုပါ(ရှောင်ကြဉ်သီလ)ပါ။ စာရိတ္တသီလ(ဆောင်သီလ) ပြည့်စုံသူများသည် ၀ါရိတ္တသီလပါ ပြည့်စုံပြီး ဖြစ်ပါတယ်လို့ နားလည်မိပါတယ်။
True Answer သည် ဓမ္မ၀ိဟာရီဆရာတော်ဆိုသော အမည်ကို ကြားသိရုံ၊ အရိယသစ္စာဆိုသော အမည်ကို ကြားသိရုံဖြင့် မုန်းတီးစိတ်များထကြွပြီး ဘယ်လိုအနိုင်ယူရမလဲ၊ ဘယ်လိုနှိပ်ကွပ်ရေးသားရမလဲ မျိုးဖြစ်နေတာ ပေါ်လွင်နေတယ်နော်။ သတိထား ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ပါ။ ဦးဥာဏက အခုထောင်ထဲရောက်နေတယ်လေ။ True Answer တို့ပြောတဲ့စကားနဲ့ဆို သူ့ထိုက်နဲ့သူကံလို့ သတ်မှတ်ပြီး နေလိုက်ကြပါဗျာ။
ဟယ်.. ပြောပေါက်ကြီးက သောတပန် မရရင်တောင် သစ္စာလေးပါးမသိဘူးဆိုပီး ရှက်စရာကြီးဖြစ်နေပီ
မိုးပြာတပ်ဖွဲ.က နိုင်ငံခြားသား(ဘာသာခြား) တွေထက်တောင်ညံ့သေးတယ်
သူတို.တွေက ၀ိပသနာ လုပ်ပြီးမှ(မှန်တယ် လက်ခံတယ်ဆိုမှ/လက်တွေ.ပေါ့လေ) တရားလေ့လာတယ်
မိုးပြာတပ်ဖွဲ.ကျမှ တရားအရင်စစ်ရတယ်လို.အေ… ညံ့ပ ညံ့ပ
ဗုဒ္ဓဘုရားက အရိယသစ္စာတရားဖြစ်တဲ့ ဓမ္မစကြာတရားတော်ကို အရင်သိအောင် ဟောကြားခဲ့တာကို မမေ့သင့်ပေ။
တရားအလုပ်ကိုမပြောနှင့် ငါးပိဖုတ်တာတောင် နည်းလမ်းအရင် မသိထားပဲ ဖုတ်ပါက အဆင်မပြေနိုင်လို့ ” ဆရာ မပြ၊ ငါးပိဖုတ်တောင် နည်းမကျ “ဆိုတဲ့ စကားပေါ်လာတာ။
သတိ –အီးပါပြီးမှ ဘယာကြော်စားပါ—
ယောက်ကျားမယူခင် ၊ခလေးအရင်မွေးပါ—အဲဒီလိုလား ?
သဘောတရား (သီအိုရီ)ကို ကျေညက်ပြီးမှ လက်တွေ့ (ပရယ်တီကယ်)လုပ်သင့်တာပါ။။
ဒါကြောင့် အရိယသစ္စာဆိုသည့် သဘောတရား (သီအိုရီ)ကို ကျေညက်ပြီးမှသာလျှင်
သတိပဌာန်လို့ ဆိုသည့် လက်တွေ့ (ပရယ်တီကယ်)လုပ်မှ ရှေ့နောက်မှန်ကန်မှာပါ။
ကိုသစ္စာရဲ့ပို့လေးကိုဖတ်မိမှ…နမ္မားဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဥာဏဟောကြားထားတဲ့ ဓမ္မသံလေးတစ်ခုကို
သတိရမိပေါ့…။ သောတာပတ္တိမဂ်ဆိုတာ…ဒဿနမဂ်..တဲ့…။ ဓမ္မစေတီဆရာထွေးလည်း…ပြောခဲ့ဘူးတာ
ပေါက်လာမိသလိုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်..။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုရင်…သကဒါန်ဂန်၊ အနာဂါန်၊ ရဟန္တာဖြစ်ဘို့ ဆိုတာ….ဘာဝေတဗ္ဗဆိုတဲ့..ပွားရမယ့်မဂ်ဖြစ်တာကြောင့်…ဒဿနနဲ့မှာသိနိုင်တဲ့…ဒါက..ဒုက္ခသစ္စာ..။ ဒါက….ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်း..သမုဒယသစ္စာ… ။ ဒါက…ဒုက္ခငြိမ်းရာ..နိရောဓသစ္စာနဲ့…ဒုက္ခတရားတို့မှာ လွတ်မြောက်ရာလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့…မဂ္ဂသစ္စာဆိုတာကို…သိပြီးသူမှသာ..ကျင့်နိုင်မယ်လို့… ခံယူမိလိုက် လို့ဖြစ်ပါတယ်…။ တကယ်တမ်းလည်း…အပွားခံဖြစ်တဲ့..ဒုက္ခစစ်စစ်ကိုမသိဘဲနဲ့ရမ်းသမ်းပွားနေကြတာ
တွေက..ဒုနဲ့ဒေးဆိုတော့..။(ကိုယ့်အမြင်အတိုင်းပြောတာပါ)။ တကယ့်ကို ငြိမ်းချမ်းရာမရဘူးဖြစ်နေခဲ့တာ
စာတွေ့ထက် လက်တွေ့လုပ်မှ တရားဆိုတာ ရနိုင်မယ်လို့ ထင်တယ်။
ဖတ်လည်း ဖတ် လုပ်လည်း လုပ်ပေါ့။
တချို့အရာတွေက စာနဲ့ မဖော်ပြနိုင်အောင် တရားသဘောက နက်နဲပါတယ်။
သိပြီးမှသာ ပွား (ကျင့်) ရမှာဆိုတော့
လူဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်အထည်အစု (သမုတိသစ္စာ)ကို အရင်သိအောင်လုပ်ရမှာလား?
လူကို အသေးစိတ်ထားတဲ့ ရုပ်၊ နာမ် (ပရမတ္တသစ္စာ)ကို အရင်သိအောင်လုပ်ရမှာလား?
လူကပြုလုပ်တဲ့ အမှု ကံ၊ သင်္ခါရ (အရိယသစ္စာ)ကို အရင်သိအောင်လုပ်ရမှာလား?
သိထားတဲ့ သစ္စာအတိုင်း ပွား (ကျင့်) ရင်တော့ ကိုယ့်ပန်းတိုင်ကိုယ်ရောက်မှာပဲ။
သို့ကြောင့် သင်ဘာကိုသိထားပြီး ကျင့်နေတာလဲ? စဉ်းစားပါ။
True Answer ရဲ့ link က ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဒေသနာကို ပရမတ္တသစ္စာအမြင်ဖြင့်ဖွင့်ဆိုသော ယောဂတရားစခန်း၏ ပုံရိပ်တွေပဲဖြစ်ပါသည်။
ဒီ ပရမတ္တသစ္စာ ရူပါ၊ ရူပတရားများကို ဗုဒ္ဓက အတ္ထကိလမထနုယောဂအကျင့်များဟု ပယ်ထားတဲ့တရားများဖြစ်ပါတယ်။
အစွန်းတရားနှစ်ပါးက ဘယ်တရားတွေ၊ အလယ်လမ်း အရိယသစ္စာက ဘယ်တရားဆိုတာ ကွဲပြားဖို့ အတွက် http://sites.google.com/site/sayamvasi/003-Dhamma.PDF က ” ဓမ္မ ” ဆိုတဲ့ တရားစာအုပ်ကို ဖတ်ကြည့်ရင် ကွဲပြားပါလိမ့်မယ်။